Fitoriana ny CUA-HIVOAKA NY 17 FEBROARY NY DIDIM-PITSARANA -
AccueilRaharaham-pirenenaFitoriana ny CUA-HIVOAKA NY 17 FEBROARY NY DIDIM-PITSARANA
04/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Omaly no niakatra fitsarana teny amin’ny tribonaly “administrative” ny fitoriana ny kaominina Antananarivo renivohitra nataon’ireo mpanolotsaina mpanohitra ao amin’ny fitantanana ny kaominina mahakasika ny tany eny Andohatapenaka. Antony fitoriana ny fampifangaroana ny raharahan’ i orinasa amin’ny raharaham-pianakaviana ary ny raharaham-bahoaka. Eo ihany koa, ny tsy fisian’ny antontan-taratasy mahakasika ny tena tompon’ny tany. Ary ny farany, tsy ao anaty filan-kevitra monisipaly no atao hanamarinana ny ady tany ataon-dRavalomanana sy ny orinasa Tiko ary ny fitondrana foibe. Fa ny tena mampanahy ireto mpanolotsaina ireto dia ny fanodinkodinana sy fampiasana fahefana ataon’ny ramatoa Ben’ny tanàna hakana tombontsoa manokana amin’ny orinasa Tiko.
Taorian’ny fihainoan’ireo mpitsara ireo mpitory dia fantatra fa amin’ny 17 Febroary izao no hivoaka ny didim-pitsarana. Ary araka ny fahitan’ny mpisolovava ny mpanolotsaina monisipaly, nahazo rariny ireo mpitory ireo. “Ny raharaham-pitsarana androany (omaly) izany dia araky ny noeritreretina. Na ny Fitsarana koa dia tsapa fa resy lahatra raha teo amin’ny fehin-teny avy tamin’ny “commissaire de la loi” izay tokony hirona mankany amin’ny fampiatoana ny lalàna momba ny fangatahana izay nataon’ny ramatoa Ravolomanana Lalatiana hanoherana ilay fanapahana laharana 14 navoakan’ny filan-kevitra monisipaly an’Antananarivo”, hoy i Ratsiferana Ravoniarison, mpisolovava ny mpanolotsaina monisipaly. “Raha tsiahivina, fanapaha-kevitra izay 30mn mialohan’ny tsy firavan’ny fivoriana ara-potoana tamin’ny volana jolay 2016 izy io. Nanakana izany izahay telo mirahavavy, Rakotondrazafy Lalatiana, Rajerison Véronique ary izaho izay miteny, Ravololomanana Lalatiana fa tsy mety izany, satria tsy ao anatin’ny lahadinika, tsy ao anatin’ny lalàna ary tsy azo atao anaty hamehana. Ny zavatra nangatahana fanapaha-kevitra tamin’izany dia ny hoe hindrana ny tanin’ny Tiko etsy Andohatapenaka ny kaominina Antananarivo hanaovana “fourrière”, hoy kosa Ravolomanana Lalatiana, mpitondra tenin’ ireo mpanolotsaina.